SARUDZA MUTAURO Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Bislama Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lithuanian Luo Malagasy Malayalam Marathi Mizo Moore Myanmar Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tatar Telugu Thai Tigrinya Tongan Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese
“Kunyange zvazvo tagadzirisa nyaya yokuti tingawana ‘sei’ chouviri, tava nezvinhu zvoumbozha zvataisamborota kuti tingava nazvo, zvakadai semichina inoita kuti mhepo ifefetere kana kudziya inonzi air conditioner, mimhanzi yatinoteerera paredhiyo ine maCD, uye kudya michero inowanika chero nguva ipi yegore, pachine nyaya yokuti ‘nei’ tichirarama. Nei tiri kudzingana nemhepo? Tiri kufirei?”—David G. Myers, purofesa wokushanda kwepfungwa paHope College, kuHolland, muMichigan, kuU.S.A.
UNGAPINDURA sei mibvunzo yakabvunzwa napurofesa uyu? Vamwe havana chokwadi kuti zvinobatsira here kutsvaka mhinduro dzacho. Zvisinei kusava nehanya nemibvunzo yakadai kwakangofanana nokusava hanya nekatombo kanenge kakupinda mushangu, ungaramba uchifamba asi hauzonakidzwi norwendo rwacho.
Kana wakambozvibvunza nezvechinangwa choupenyu, hausiwe woga. Maererano nokumwe kutsvakurudza kwakakura kuri kuitwa nezvetsika dzevanhu kunonzi World Values Survey, munyika dzakawanda nhamba yevanhu vari kufunga nezve“zvinoreva upenyu uye chinangwa chahwo” iri kuramba ichiwedzera.
Kuti unyatsogadzikana mupfungwa, unofanira kuwana mhinduro yemibvunzo mitatu inokosha.
Ungawana kupi mhinduro dzechokwadi dzemibvunzo iyi inokosha? Pane kufungidzira kana kutevedzera vanozviti vanoziva, zvikamu zvinotevera zvine mhinduro dzinowanikwa muShoko raMwari, Bhaibheri. Tinokukumbira kuti uvhure Bhaibheri rako wozvionera zvarinotaura.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kutsvaka Mhinduro
w08 2/1 p. 3